Mareykanka Oo Uu Ka Fashilmay Weerar Kale Oo Ay Rabeen Inay Ku Khaarajiyaan Jeneral Ka Tirsan Ciidamada Iran | Marsa News
Mareykanka Oo Uu Ka Fashilmay Weerar Kale Oo Ay Rabeen Inay Ku Khaarajiyaan Jeneral Ka Tirsan Ciidamada Iran
Hargeisa:(Marsanews) Militariga Mareykanka ayaa ku guuldarreystay isku day ay ku dili lahaayeen jeneral kale oo ka tirsan ciidamada Iran oo isagu ku sugnaa dalka Yemen, isla maalintii uu maraykanku duqeynta drone-ka ku dileen Jeneral Qasem Soleimani, oo ahaa taliyihii ugu awoodda badnaa ciidamada Iran, waxa daabacday wargayska New York Times.
Howlgalkan labaad ayaa muujinaya in maamulka Trump uu waday qorshe balaadhan oo aan markii hore la ogeyn, kaasi oo looga dan lahaa in lagu wiiqo awoodda Iran ay ku leedahay bariga dhexe
Weerarka fashilmay ee ka dhacay Yemen ayaa ahaa mid la doonayey in lagu dilo Abdul Reza Shahlai oo ka tirsan ciidamada Qudus, ee uu hoggaamin jiray Jeneral Soleimani.
Afar sarkaal oo xog ogaal u ahaa weerarka ayaa sheegay in Shahlai la beegsaday duqayn balse uu ka bad-baaday.
Madaxweyne Trump ayaa ansixiyey weerarkan la rabay in lagu khaarajiyo Shahlai isla xilligii uu ansixiyey weerarkii lagu dilay Jeneral Qasem Soleimani, 3-dii bishan, inkasta oo aanay cadayn in labada weerar ay dhaceen wakhti isku mid ah.
Shahlai iyo Soleimani ayaa ahaa laba ka mid ah dhowr sarkaal oo u dhashay Iran islamarkaana maamulka Trump uu dadaal badan galiyay sidii looga hortagi lahaa inay fuliyaan weeraro ka dhan ah goobaha saldhigyada u ah Mareykanka iyo in Iran laga joojiyo “gardarrada” ay ka waddo gobolka, sida ay sheegeen saraakiil Mareykan ahi.
Dowladda Mareykanka ayaa hore u shaacisay in 15 milyan oo dollar, la siin doono cid kasta oo keenta akhbaar ku saabsan Shahlai.
Shalai ayaa lagu eedeeyey inuu ku lug lahaa weeraro ka dhan ah xulufada Mareykanka iyo isku daygii fashilmay ee sanaddii 2011 lagu dili lahaa safiirka Sacuudiga ee Mareykanka.